श्रीमती माइत गएको मौकामा श्रीमानले परस्त्री कोठामा ल्याउदा सुइको पाएर श्रीमतीले रंगेहात भेटाएपछि… - Hamro Abhiyan
काठमाडौं । नेपाली कमेडी तथा अन्य जर्नलका भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । बिभिन्न बिषयमा समाबेश गरि मानिषहरुलाई मनोरंजन तथा केहि संदेश दिनका लागि दिनानु दिन भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । भिडियोमा समाजमा चलि आएका बिभिन्न बिषयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । यो भिडियोमा एक श्रीमान र श्रीमती बीचको कथा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मनोरंजन तथा केहि संदेश दिनका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका भिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो । दर्शकलाइ भरपुर मनोरंजन दिने उदेश्यले निर्माण गरिएको भिडियोमा कार्यरत प्राबिधिक टोलिहरु पूर्वका रहेका छन् । आजकल धेरै प्रकारका कमेडी लगायत अन्य धारका छोटा चलचित्रहरु निर्माण हुने गर्दछन ।साहित्यिक पत्रिकाको पहिलो अङ्क पाँच हजार प्रति !
साहित्यिक पत्रिकाको वितरण चुनौतीपूर्ण देखिएका बेला नवप्रकाशित ‘शमी’ साहित्यिक मासिक पत्रिका पहिलो अङ्क नै पाँच हजार १०० प्रतिसहित बजारमा आएको छ ।
पहिलो अङ्कमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दी वाङ्यमय पुरुष सत्यमोहन जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्वबारे समालोचना तथा अन्य विधाका रचना समावेश छन् । नेपाली पत्रकारिताको थालनी साहित्यिक पत्रिकाबाटै भएको हो । पत्रिकाको प्रधानसम्पादक प्रदीप नेपाल र कार्यकारी सम्पादक लव गाउँले हुनुहुन्छ ।
भुटानी रोनाल्डो जस्ले नेपाललाई यति धेरै मायाँ गर्दै, नेपाली भाषामै दिए यस्तो मनछुने…
विवाह गरेको केही दिनमै श्रीमानलाई पहिरोले च्या’प्यो, पेटमा भएको बच्चा जन्मेको ८…
बहिनीको बिहेका लागि दुबोको माला लिएर जाँदै गरेका दाजुको कार दुर्घ’टनामा गयो ज्या’न […
‘कार्टुन क्रु’ फु’ट्नुको भित्री कारण यस्तो पो रहेछ ! सबिन कार्कीले…